Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.3.2 fandrefesana
Fandrefesana dia ny fanaovana inferences avy amin'izay ny namaly hoe ahoana ny namaly eritreretina sy ho atao.
Ny sokajy faharoa ny fanadihadiana tanteraka ny fandrefesana sehatra hadisoana; dia miresaka amin'ny fomba ahafahantsika manao inferences avy ny valiny izay namaly no homena ny fanontaniana. Raha ny fandehany fa ny valiny raisintsika, ka noho izany ny inferences ataontsika, dia afaka miantehitra manakiana-ary amin'ny fomba mahagaga indraindray-on tena fomba mangataka. Angamba na inona na inona manan-danja io teboka mampiseho tsara kokoa noho ny vazivazy ao amin'ny boky mahafinaritra Ny fametrahana Fanontaniana amin'ny Norman Bradburn, Seymour Sudman, ary Brian Wansink (2004) :
Roa mpisorona, ny Dominikana sy ny zezoita, miresaka na noho ny ota izany hifoka sigara sy hivavaka tamin'izany andro izany. Rehefa tsy mba hahatongavana amin'ny famaranana, samy mandeha ho any hevitra ny tsirairay avy ambony. Hoy ny Dominikana: "Inona no ambony ny hoe?"
Ny Zezoita mamaly, "Hoy izy hoe fa maninona."
"Izany no mampihomehy" ny Dominikana namaly, "hoy ny tompon'andraikitra fa ny fahotana."
Ny Zezoita hoe: "Inona no mangataka aminy?" The Dominikana namaly, "Nanontaniako izy raha toa ka maninona hifoka sigara rehefa nivavaka." "Oh" hoy ny Zezoita, "aho nanontany raha toa ka OK ny mivavaka raha mbola ny fifohana sigara."
Maro ohatra ny ara-dalàna tahaka ny olona mahazo ny roa mpisorona. Raha ny marina, ny tena olana eo amin'ny fototry ny vazivazy io manana anarana ao amin'ny fanadihadiana fikarohana fiaraha-monina: fanontaniana endrika vokany (Kalton and Schuman 1982) . Ny mahita ny fanontaniana mety hisy fiantraikany amin'ny teny vokatry tena fanadihadiana, dia diniho ireo roa tena mitovy fanontaniana fanadihadiana ilay izy:
"Ohatrinona no miombon-kevitra ity fanambarana manaraka ity: olona kokoa ny tsiny noho ny ara-tsosialy sy ny toe-piainana ho an'ny heloka bevava ny fandikan-dalàna eto amin'ity firenena ity."
"Ohatrinona no miombon-kevitra ity fanambarana manaraka ity: toe-piainana ara-tsosialy dia be omena tsiny noho ny olona noho ny heloka bevava sy ny fandikan-dalàna eto amin'ity firenena ity."
Na dia fanontaniana roa toa mba handrefesana ny toy izany, dia namoaka vokatra hafa amin'ny tena fanadihadiana fanandramana (Schuman and Presser 1996) . Rehefa nanontaniana lalana iray, tokony ho 60% ny olona namaly no nitatitra fa nisy kokoa ny tsiny noho ny heloka bevava, fa raha anontaniana ny fomba hafa tokony ho 60% nitatitra fa ny toe-piainana ara-tsosialy dia bebe kokoa hanome tsiny (Sary 3.2). Amin'ny teny hafa, na ny kely samy hafa ny fanontaniana roa mety hahatonga ny mpikaroka ny hafa famaranana.
Sary 3.2: Vokatra avy amin'ny fanadihadiana fanandramana (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . Ny mpikaroka dia afaka mahazo valiny samy hafa miankina amin'ny tena ny fomba nanontany ny fanontaniana. Izany no ohatra amin'ny endrika fanontaniana vokany (Kalton and Schuman 1982) .
Ankoatra ny amin'ny firafitry ny fanontaniana, namaly ihany koa dia afaka manome valiny samy hafa miorina amin'ny teny manokana nampiasaina. Ohatra, mba handrefesana ny heviny momba ny fitondram-panjakana zava-dehibe, namaly ireo namaky ny manaraka avy hatrany:
"Isika dia miatrika olana maro eto amin'ity firenena ity, tsy misy izay azo vahana mora foana na tsy mandany vola. Handeha aho mba hilaza ny sasany amin'ireo olana, ary ho an'ny tsirairay tiako ianao mba hilaza amiko raha ny hevitrao izahay mandany vola be loatra izany, kely loatra ny vola, na ny marina vola. "
Manaraka, ny antsasaky ny namaly no nanontaniana momba ny "fifanampiana" ary ny antsasany dia nanontaniana momba ny "fanampiana ny mahantra." Raha toa ireo toy ny andian-teny roa samy hafa ho toy izany, dia nahatonga vokatra hafa mihitsy (Sary 3.3); Amerikana mitantara hoe tsara lavitra kokoa ny manohana ny "fanampiana ho an'ny mahantra" noho ny "fifanampiana" (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . Raha mihevitra ireo mpikaroka fanadihadiana fehezanteny vokatry mba ho ara-dalàna, dia afaka mihevitra azy ireo ihany koa ny fikarohana hitany. Izany hoe, isika dia nianatra zavatra momba ny hevi-bahoaka avy amin'izany vokany.
Sary 3.3: Vokatra avy amin'ny Huber and Paris (2013) . Namaly no tena manohana ny "fanampiana ho an'ny mahantra" noho ny "fifanampiana." Izany no ohatra amin'ny fanontaniana fehezanteny vokany ahoana ny valiny izay mpikaroka mandray miankina amin'ny marina izay teny ampiasainy ao ny fanontaniana.
Rehefa ohatra ireo fanontaniana momba ny teny sy ny fehezanteny vokatry vokatry mampiseho, ny valiny izay mandray mpikaroka azo vokany amin'ny kolaka fomba mifototra amin'ny fomba hanontany ny fanontaniana. Izany akory tsy midika fa tsy tokony fanadihadiana ampiasaina; matetika tsy misy safidy. Kosa, ny ohatra mampiseho fa tokony hanorina ny fanontaniana tsara ary tsy tokony hanaiky valiny uncritically.
Concretely indrindra, izany dia midika fa raha nandalina Ny valin'ny fandinihana natao nangonin'ny amin'ny olon-kafa, ho azo antoka fa efa namaky ny tena fanontaniana. Ary, raha mamorona fanontaniana manokana, manana soso-kevitra telo. Voalohany, Izaho dia manoro hevitra mamaky bebe kokoa momba fanontaniana famolavolana (ohatra, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); misy intsony izany noho izaho efa afaka hamaritana eto. Faharoa, dia milaza fa Adikao-teny ho an'ny teny-fanontaniana avy any ambony-kalitao fanadihadiana. Na dia izany feo toy ny fisandohana, kopia fanontaniana dia Nampirisika amin'ny fanadihadiana fikarohana (raha mbola ianao fanadihadiana teny maro ao amin'ny tany am-boalohany). Raha mandika fanontaniana avy any ambony-kalitao fanadihadiana, dia afaka matoky fa efa notsapaina izy ireo ary afaka mampitaha ny valin-ny fanadihadiana ny valinteny avy amin'ny hafa fanadihadiana. Farany, Izaho dia manoro hevitra anao mialoha hitsapa ny fanontaniana amin'ny olona sasany avy amin'ny endriny mponina (Presser et al. 2004) ; ny zava-nitranga dia ny fanaovana fitiliana mialoha olana foana ny maneho mahagaga.